Al-Shabaab oo weeraray xarun isgaarsiin oo ku taala dalka Kenya – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaAl-Shabaab oo weeraray xarun isgaarsiin oo ku taala dalka Kenya
Al-Shabaab oo weeraray xarun isgaarsiin oo ku taala dalka Kenya
14/02/2019 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Dibada, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Al Shabaab ayaa weerar ku qaaday Deegaanka Galma-Gala oo ka tirsan dagmada Faafi maamulka Gaarisa ee gobolka Waqooyi bari ee dalka Kenya.
Ciidamo katirsan booliiska dalka Kenya oo ku sugnaa deegaanka la weeraray ayaa la sheegay in ay ka firxadeen deegaanka kadib markii ay soo galeen dagaalyahanada katirsan Al Shabaab.
Warbaahinta dalka Kenya ayaa ku warantay in dagaalyahanada Al Shabaab ay bur buriyeen sidoo kale gubeen xarun ay shirkada Isgaarsiinta ee Safaricom ku laheyd Deegaanka Galma-Gala.
Sargaal katirsan Al Shabaab ayaa sheegay in weerarkan lagu bur buriyay xarunta Safaricom ee Deegaanka Galma-Gala iyagu ka dambeeyeen, waxa uuna xusay in booliiskii deegaanka joogay ay firxadeen.
Al Shabaab ayaa marar badan weeraro ay ku qaadeen deegaano katirsan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waxa ay ku bur buriyeen xarumo ay leedahay Shirkada Isgaarsiinta Safaricom oo ah tan ugu weyn ee laga isticmaalo dalka Kenya.
AKHRISO:- Wasiir ka tirsan wasiirada cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo is casilay
Dowlada Ethiopia iyo Qaramada Midoobay oo ka wada hadlay xoojinta xuquuqul Insaanka